Macalinka Spain Oo Sharaxay Sababtii Uu Morata Uga Reebay Xidigaha U Dheeleysa Kulamada Soo Aadan %
Maanta oo Jimco ahayd ayaa waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay Liiska ciyaartoyda udheelaysa xulka qaranka Spain kulamada ay la kala ciyaari doonan dalalka kala ah: Jarmalka iyo Argentina, kuwaasoo ah ciyaaro saaxiibtinimo ah.
Ciyaartoyda uu macalinka qaranka Spain, ninka lagu magacaabo Julen Lopetegui, uusan soo xulan ayaa waxaa kamid ah, weerar yahanka Chelsea, ee Alvaro Morata kaasoo sanad ciyaareedkan Blues uga soo biiray Los Blancos.
Julen Lopetegui, oo warbaahinta la hadlayey kadib markii uu ku dhawaaqay liiska ciyaartoyda ayaa wuxuu si gaar ah uga hadlay arrinta Morata isagoona sheegay in sababtu ay tahay in laacibkaan uusan kooxdiisa udheelin kulamo badan.
“Berri ma ahan koobka aduunka, waxaa jira ciyaaryhano, kuwaasoo aanan soo qaadan sidoo kale, laakiin waxay haystaan fursado ay isku carbin karaan si ay uga mid noqdaan xulka,” ayuu si cad ugu sheegay wariyaasha tababare Lopetegui.
“Waxaan raadineynaa akhbaaraad ku saabsan ciyaaryahanada sida [Morata] – Wuxuu qabay dhibaatooyin kala duwan, wuxuu dheelay wax yar, laakiin wuxuu haystaa fursado uu isku carbin karo,” ayuu hadalkiisa ku daray.
“Morata waxaan hubaa inuu ku dhameysan doono xili ciyaareedkan waayo fiican, wuxuuna u haystaan fursado fiican inuu noo raaco koobka aduunka,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, hogaamiyaha qaranka Spain.
Sikastaba, kulamada uu wadanka Spain la dheeli doono dalalka Germany iyo Argentina oo kala dhici doona maalinta Jimcaha ah ee Isbuuca dambe iyo waliba 27-ka bisha Maarso ayaa lagu kala dheeli doonaa garoomada Dusseldorf iyo Metropolitano.
Hoos Ka Arag Liiska Ciyaartoyda Spain Oo Dhameystiran: